टोनी मोरिसन : मानवताको आवाज बोल्ने प्रखर शब्दशिल्पी
सोमवार अमेरिकाकी महान् लेखिका टोनी मोरिसनको निधन भयो । मोरिसनको कुरा आउँदा दिमागमा तत्कालै आउने शब्द हो – प्रखर ।
उनका तस्वीर अनि उनका अन्तर्वार्ताहरूमा उनी मूर्खहरूलाई सहन नसक्ने र अज्ञानतालाई नरुचाउने महिला लाग्छिन् ।
कुनै अन्तर्वार्ताकारले उनलाई सोधेको प्रश्न ‘जातिवादी’ जस्तो लाग्यो भने उनको आँखामा आलोचनाको आगो बल्थ्यो । अझ उनको आख्यान र गैरआख्यान दुवै लेखनीमा उनको प्रखरता देख्न पाइन्थ्यो ।
उनी निराकारको व्याख्या गर्न सक्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्व थिइन् । उनका वाक्यहरू तीरजस्ता तीखा हुन्छन् र तिनमा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन । प्रत्येक वाक्यले एउटा निश्चित तथ्यको सम्प्रेषण गर्छ ।
उनले लेखेका निबन्ध, भाषण र घोत्ल्याइँहरूको संकलन ‘माउथ फुल अफ ब्लड’ले उनको जिज्ञासाको शक्ति र विस्तारको जीवन्त नमूना प्रस्तुत गर्छ । उनले दृढ दृष्टि र स्थिर लेखनीका साथ जाति र लिंग अनि विश्वव्यापीकरण र आप्रवासका बारेमा लेखेकी छन् । हामी वरिपरिको विश्व र अहिलेको राजनीतिक स्थितिलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा उनको चासो थियो । व्यापक आन्दोलनको दृश्यलाई परीक्षण गर्ने क्रममा उनले सीमा र प्रवेशद्वार, घर र अपनत्वका विषयमा चेतावनी जारी गरेकी छन् ।
मोरिसनको लेखनीको महत्त्व अहिलेको समयमा झन् टड्कारो बनेको छ किनकि अहिले देशहरूबीच पर्खाल ठडिएका छन् र राज्यहरू विभाजन गरिएका छन् भने सर्वसाधारणलाई अदृश्य बनाइएको छ । उनी अपनत्वको भावना क्षीण हुँदै गएको भन्दै हामीलाई प्रश्न गर्छिन्, ‘हामीले कसप्रति सबभन्दा बढी बफादारी देखाउने हो ? परिवार, भाषा, संस्कृति, देश, लिंग ? धर्म, जाति ? अनि यी सबै कुराको महत्त्व छैन भने हामीहरू शालीन हौं कि विश्वव्यापी हौं कि एक्लोपनले सताइएका व्यक्ति हौं ? अर्को शब्दमा भन्दा हामीहरू केमा आबद्ध छौं भन्ने कुरा कसरी निर्णय गर्छौं ? हामीले जे गरिरहेका छौं त्यो गर्न केले विश्वस्त तुल्याउँछ ? यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा विदेशीपना भनेको के हो ?’
यस्ता केही प्रश्नहरू उनले चार दशकको अवधिमा आफ्ना उपन्यास र निबन्धहरूमा सोधेकी छन् । अफ्रिकी अमेरिकी अनुभवको गाथा लेखेबापत सन् १९९३ मा उनले नोबेल साहित्य पुरस्कार पाएपछि उनको नाम २०औं शताब्दीका महानतम लेखकहरूमा दरियो ।
उनको पहिलो उपन्यास द ब्लुएस्ट आई (सन् १९७०) र बिलभेड (सन् १९८७) संसारभरिका विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गरिए । अमेरिकी लेखकहरू जेम्स बाल्डविन र रिचर्ड राइटको मृत्युपछि मोरिसन आफ्नो पुस्ताका काला जातिका लेखकको ‘माता र पिता दुवै बनेको’ भनी लेखक तथा रंगमञ्च समालोचक हिल्टन आल्सले सन् २००३ को अक्टोबर महिनामा द न्यु योर्कर पत्रिकामा लेखे ।
मोरिसनलाई एक्लै राखेर उनको मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । उनलाई काला जातिका लेखक र काला जातिको अध्ययनको शीर्षसमूहको केन्द्रमा राखेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । प्रकाशनगृह र्‍यान्डम हाउसकी एक सम्पादकका रूपमा उनले मुहम्मद अलीको आत्मकथा ‘द ग्रेटेस्ट’ सन् १९७६ मा प्रकाशित गरिन् र एन्जेला डेभिसका पुस्तकहरू पनि बाहिर ल्याइन् ।
मोरिसन अत्यन्तै सम्मानित र प्रिय लेखिका हुन् (बाराक ओबामा र ओप्रा विन्फ्रे उनका प्रशंसक थिए) । उनी सर्वाधिक अध्ययन र समालोचना गरिएकी लेखिका पनि हुन् । उनले अफ्रिकी अमेरिकीहरूलाई लाक्षणिक रूपमा आवाज दिइन् अनि उनीहरूको (बोलीचालीको, श्रव्य र अनौपचारिक) भाषालाई पनि आफ्ना उपन्यासमा पुनः सिर्जना गरिन् र उनीहरूको जीवन पनि दर्शाइन् । उनी जहिले पनि आफ्नो प्रयास विश्वसनीय बनाउन चाहन्थिन् अनि कुनै पनि विषयवस्तुको भित्री गहिराइलाई बुझेर त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न चाहन्थिन् । सन् १९८१ मा उनले द न्यु रिपब्लिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘मलाई कसैले मेरा पुस्तकहरू ‘काव्यात्मक’ छन् भनेको चित्त बुझ्दैन किनकि त्यसले अनावश्यक फुँदा जोडेको भाषाको संकेत दिन्छ । म काला जातिका मानिसले बोल्ने भाषालाई आफ्नो मूल शक्तिशाली रूपमा पुनःस्थापना गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि भाषा सघन हुनुपर्छ तर बुट्टेदार हैन ।’
मोरिसनको विशेषता नै शक्तिशाली भाषा हो र उनलाई यसैका लागि सधैं सम्झिइनेछ । नोबेल पुरस्कार पाएपछि दिएको सम्भाषणमा उनले बुद्धिमती वृद्धा र चराको कथा हालेर लेखक र भाषाका विषयमा कुरा गरिन् । ‘लेखक हुनुको नाताले उनी भाषा आंशिक रूपमा एक प्रणाली हो, आंशिक रूपमा एक जीवन्त वस्तु हो जसमा नियन्त्रण राख्न सकिन्छ र मुख्य रूपमा कर्तृत्व हो– त्यस्तो काम जसको परिणाम हुन्छ भन्थिन् ।’ मोरिसनका लागि भाषा एक कर्म थियो, कार्य थियो, यसले बनाउँथ्यो पनि बिगार्थ्यो पनि । यसले चोट दिन्थ्यो अनि यसले सुरक्षा दिन्थ्यो ।
मोरिसनलाई अफ्रिकी अमेरिकी लेखिकाका रूपमा सधैं सम्झिइनेछ तर उनको प्रभाव कुनै पनि सीमामा बाँधिएको छैन । उनका उपन्यासहरूमा एक विशेष परिवेश देखिएपनि उनको लेखनी त्यस परिवेशभन्दा निकै टाढासम्म प्रतिध्वनित हुन्छ । उनका ‘सङ अफ सोलोमन’, ‘सुला’, ‘टार बेबी’ लगायतले पाठकलाई च्याप्प समात्छ अनि फुत्किन दिँदैन । यी उपन्यासले अस्वीकार र आत्मघृणा, अपनत्व तथा विरक्तिका कथा भन्छन् तर अन्ततोगत्वा यी सबै प्रेमकै कथा हुन् ।
ओपन म्यागजिनमा प्रकाशित नन्दिनी नायरको आलेख